Arsenal Iyo Liverpool Oo Diyaarado Qalabka Caafimaadka Lagu Rakibay Kusoo Qaaday Mohamed Salah Iyo Elneny – Waa Sidee Xaaladdoodu? – Laacibnet.net
Arsenal Iyo Liverpool Oo Diyaarado Qalabka Caafimaadka Lagu Rakibay Kusoo Qaaday Mohamed Salah Iyo Elneny – Waa Sidee Xaaladdoodu?
Xiddigaha reer Masar ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane ayaa ka degay waddanka UK, gaar ahaan magaalooyinka London iyo Liverpool iyagoo qaba xanuunka Korona Fayras oo ku dhacay intii ay ku sugnaayeen Masar.
Diyaarad lagu xidhay qalabka caafimaadka oo sida Ambalaaska loo hagaajiyey, ayna la socdaan dhakhaatiir gargaar u fidisa haddii ay xaaladda ciyaartoydani xumaato ayaa lagaga soo qaaday waddanka Masar, waxaanay keentay England oo ay guryahooda karantiil ku gelayaan.
Mohamed Salah ayaan u ciyaarin xulkiisa Masar kulankii isreeb-reebka Qaramada Afrika ee Togo, kaddib markii uu xanuunku ku dhacay intii ka horreysay oo uu ka qayb-galay arooska walaalkii, halkaas oo lagaga soo duubay isagoo qoob ka ciyaar samaynaya.
Laakiin Mohamed Elneney ayaa isagu uu xanuunku haleelay Salaasadii, waxaana waqtigaas lagu qasbay inuu kulanka Togo bannaanka ka joogo.
Mohamed Salah ayaa canaan badan ku mutaystay qaabka uu isku ilaalin waayey ee uu uga qayb-galay arooska xilli dunida laga cararayo in meelo la iskugu yimaaddo, xanuunkuna uu si xun u faafayo mar kale.
Tababaraha Liverpool ayaa iska diiday inuu eedayn u jeediyo Salah, hase yeeshee dad badan oo uu hormood u yahay weeraryahankii hore ee Masar ee Mido ayaa canaan dusha uga tuuray, iyagoo xusay inuu sameeyey masuuliyad darro.
Mohamed Salah ayaa la sheegay in maalinta Isniinta soo socota lagu samayn doono baadhitaan kale oo lagu hubinayo xaaladdiisa caafimaad iyadoo labadii baadhitaan ee horeba caddeeyeen inuu xanuunkani hayo.
Liverpool oo ay ciyaartooyo badani ka dhaawacan yihiin ayaan Axadda heli doonin adeegga ciyaareed ee Mohamed Salah, waxaana tijaabada Isniintu ay ku beegnaanaysaa maalintii 10aad ee karantiilkiisa, taas oo go’aamin doonta haddii uu qayb ka noqon doono kulanka Champions League ee badhtamaha suuqa.
Mohamed Elneney ayaa isaguna waxa uu seegayaa safarka ay kooxdiisa Arsenal ku tegayso Elland Road oo ah garoonka Leeds United usbuucan, waxaanu sidoo kale seegi doonaa kulamada Europa League ee usbuuc dhamaadka.
Xidhiidhka kubadda cagta Masar ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in labadan ciyaartoy lagu qaaday diyaarad sida Ambalaaska loo qalabeeyey oo ay ku rakiban yihiin dhamaan waxyaabihii lagula tacaali lahaa haddii ay xaaladdooda caafimaad xumaato.